कार्बन स्टील - फलाम र कार्बन मिश्र धातु - कुल हार्डवेयर को बारेमा 80% लाग्छ। भौतिक सन्तोषजनक यांत्रिक गुणहरू, अपेक्षाकृत कम उत्पादन लागत छ। इस्पात को घनत्व (7.7 7.9 गर्न) * 103 किलो / एम 3।
यस मिश्र धातु राम्रो दबाव र काटन उपचार गरिएको छ। यो सामाग्री doped मिश्र धातु यी गुणहरू मा उच्च छ भन्ने उल्लेख गर्नुपर्छ। यो संग, कार्बन स्टील कम workability गर्मी उपचार। उछाल को उच्च महत्वपूर्ण गति संग जडान मा, मिश्र धातु पानी मा cooled छ। यो, बारी मा, महत्वपूर्ण warpage र उत्पादन को विरूपण गर्न जान्छ। लागि कार्बन स्टील शक्ति doped नै मिश्र धातु थियो, यो एक कम तापमान मा जारी गर्न आवश्यक छ। यस सन्दर्भमा मा, एक भण्डारण उच्च भोल्टेज, सामाग्री को संरचनात्मक बल कम छ।
कार्बन स्टील उच्च गुणवत्ता र साधारण गुणस्तर: दुई प्रकारका छ।
दोस्रो प्रकार प्रतिनिधित्व छ लुढका उत्पादन: च्यानल, ट्यूब, कोण, पानाहरू, बीम, छड र यति मा। Nonmetallic समावेशन हानिकारक अशुद्धियों पारंपरिक कार्बन स्टील गुणस्तर अनुज्ञेय सामग्री। र सामाग्री को ग्याँस संतृप्ति केही डिग्री दिनुभयो।
अनुसार गुण र जटिल कार्बन मिश्र को उद्देश्य संग समूहमा ए, बी र सी मा subdivided छन्
पहिलो समूह (एक) भागहरु को उत्पादन मा प्रयोग तातो काम बिना। तसर्थ, भौतिक यांत्रिक गुण पनि कायम रहन्छ।
इस्पात समूह बी एक हट काम (जस्तै, रोलिंग, फोर्जिंग, वेल्डिंग) को प्रयोग गरेर भागहरु को उत्पादन मा प्रयोग गरिन्छ। यस मामला मा, यांत्रिक गुण र प्रारम्भिक संरचना परिवर्तन गरियो। यी वस्तुहरू लागि रासायनिक संरचना बारे महत्वपूर्ण जानकारी छ। विवरण निर्धारित हुनेछ र तातो काम मोड आधारमा।
समूह बी को स्टील्स विनिर्माण वेल्डेड संरचना महत्वपूर्ण भागहरु लागि प्रयोग गरिन्छ।
यो धातु सामाग्री प्रशोधन को विधि इस्पात को थर्मल चालकता असर भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। यसरी, उत्पादन दबाव कुनै पनि प्रभाव एक गरम भाग को कम तातो भागमा गर्मी सञ्चालन गर्न सम्पत्ति बढ्छ।
साधारण गुणस्तर को कार्बन स्टील, तीन समूह विभिन्न इस्पात संरचना, उपकरणहरू र हल्कासित लोड मिसिन भागहरु को उत्पादन को लागि प्रयोग गरिन्छ। जहाँ उत्पादनहरु को प्रदर्शन rigidity द्वारा प्रदान गरिएको छ सामाग्री यस प्रकार अवस्थामा लागू हुन्छ। साधारण गुणस्तर को कार्बन स्टील व्यापक प्रबलित ठोस संरचना निर्माण मा प्रयोग गरिन्छ निर्माण उद्योग मा। मिश्र बी र डी को अलग समूह चिसो राम्रो काम र वेल्डेड गर्न subjected छन्। यी स्टील्स जडानमा व्यापक पछि cementation गर्न subjected छ केही जो फ्रेम, वेल्डेड फारमहरु, भवन संरचना, साथै फास्टनरों, को निर्माण मा प्रयोग गरिन्छ।
तिनीहरूले, high- medium- र कम कार्बन रूपमा विभाजित भए।
चिसो अवस्थामा उच्च ductility र कम बल द्वारा हाल विशेषता। सामान्यतया, यी कम कार्बन स्टील पातलो पाना मा निर्मित छ। कार्बन र सिलिकन यी मिश्र नरम छन् भनेर, एउटा सानो रकममा therein समावेश छन्।
इस्पात मध्यम (संख्या र43), उच्च शक्ति द्वारा विशेषता। यी मिश्र गियर, शाफ्ट, pulleys र कृषि र ट्रक को अन्य भागहरु र रेल पाङ्ग्राहरू, रेल र अन्य उत्पादनहरु को निर्माण मा प्रयोग गरिन्छ।
उच्च-कार्बन स्टील (संख्या5र 6) र एक उच्च मैंगनीज सामग्री उच्च बल तार Springs, पानीका मुहानहरू र अन्य भागहरु उच्च लोच र घर्षण प्रतिरोध आवश्यकता को निर्माण सबैभन्दा अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ।
Ketones: रासायनिक गुण र अठोट
पृथ्वी कसरी पुरानो छ?
गर्मी स्थानान्तरण को विभिन्न प्रकार के हुन्?
दालचिनी र अन्य उपहार एक स्वादिष्ट स्याउ जाम कसरी खाना पकाउनु?
खनिज Tatarstan: मुख्य क्षेत्र
तिनीहरूले लाग्छ रूपमा प्रकाश को गति स्थिर हुन सक्दैन,
कसरी लुगा आकर्षित गर्न। फेशन डिजाइनर गर्न को लागि शुरुआती केही सुझावहरू
वेन को षड्यंत्र: सुविधाहरू, प्रदर्शन, र समीक्षा
तोरी को नुस्खा, घर-पकाएको
कप मालिश: प्रक्रिया को लाभ